La kulan Sony Xperia XZ2 cusub iyo XZ2 Compact | Androidsis
La kulan Sony Xperia XZ2 cusub iyo XZ2 Compact
Hagaag, Maalinta Sony ee MWC 2.018. 26-ka Febraayo waxaa loo calaamadeeyay waqti dheer kalandarka kuwa jecel Sony iyo taleefannadooda casriga ah. Ka dib markii la ogaaday inuu yahay midka ugu sarreeya ee kala duwan sida Samsung Galaxy S9. Laptops ka Huawei, iyo cibaaro kale oo badan. Wakhtigii Sony ayaa yimid, Waxaan kuu sheegeynaa sida ay yihiin Xperia XZ2 iyo Xperia XZ2 compact.
Suuqa ay inta badan soosaaraashu raacaan isbeddellada, Sony waligeed run ayey ku tahay nafteeda. Waxaa dhaleeceeyay dadka qaar oo ay ku ammaaneen kuwa kale sababtaas darteed, Sony had iyo jeer waxay laheyd dhagaystayaasheeda. Maanta taageerayaasha iyo kuwa xiisaha lihiba waxay sugayeen moodellada cusub ee ay Sony ku soo bandhigtay MWC ee 2.018.
1 Kani waa Xperia XZ2 cusub iyo Xperia XZ2 is haysta
2 Kaamirad wanaagsan, awood badan iyo bateri ka weyn
3 Xaashida xogta ee cusub ee Sony Xperia XZ2 iyo XZ2 Compact
4 Xperia XZ2 fiidiyowga laga soo qaaday MWC18
5 Xperia XZ2 Compact fiidiyowga laga soo qaaday MWC18
6 Maxaad u malaynaysaa waxa cusub ee ka socda Sony?
Kani waa Xperia XZ2 cusub iyo Xperia XZ2 is haysta
Waxaan ugu dambeyntii awoodnay inaan aragno soo bandhigida sharadka cusub ee Sony ee adduunka casriga ah. Laba qalab oo jebi in yar (waqtiga) leh bilicsanaanta timid waxaan dareemayaa tonic shirkadan. Waan fiirsaneynaa geesaha iyo geesaha waxyar ka badan wareegsan taas oo ka dhigaysa kuwo la jaanqaadaya wararka aan awoodnay inaan aragno maalmahan.
Ballanqaadka Sony ee casriga ah oo leh shaashad "aan dhammaanayn". Muuqaalka cusub ee Xperia XZ2 iyo XZ2 Compact 5,7 iyo 5 inji oo soo bandhig ah, siday u kala horreeyaan. Iyo labada xisaabood oo leh geedo aan jirin. Faahfaahin ka dhigaysa labadan xubnood ee cusub ee qoyska Sony mid muuqda. Iyo in ay leeyihiin Xal buuxa HD iyo shaashadda dhinaca 18: 9 saamiga dhinaca.
Muuqaal kale oo cusub oo loogu talagalay Xperia XZ cusub waa meesha uu ku yaal akhristaha faraha. Ka dib markaad dul dhigto badhanka bilowga, iyo "tijaabinta" aan aad u guuleysan ee ku dhejinta badhanka dhinaca. Sony waxay go’aansatay inay aqristaha sawirka faraha ka dhigto dhabarka, ka hooseeya kaamerada sawirka. Meel aad u raaxo badan oo ergonomic ah. Taas oo isticmaaleyaashaadu ay qadarin doonaan.
Mid ka mid ah awooda taleefannada casriga ah ee Sony ayaa had iyo jeer ahaa kamaradaha. Sony had iyo jeer waa isku mid tayada marka laga hadlayo sawir qaadista. In kasta oo, sida mar horeba ku dhacday horumarinnada kale ee qaybta, Sony ma sharadayso isla inta kale, kamaradaha laba-geesood ah Xperia XZ2 iyo XZ2 Compact-ka cusub waxay leeyihiin kamarad hal lens ah. Laakiin taasi micnaheedu maahan inay yeelan doonaan kaamirooyin ka tayo hooseeya inta kale.
Kaamirad wanaagsan, awood badan iyo bateri ka weyn
Labada XZ ee cusub waxay la imaan doonaan qalab kamaradaha leh 19 megapixel f / 1.8 xal. Ma jiro laba muraayadaha indhaha ama laba kamaradood oo lagama maarmaan u ah inay soo bandhigaan kamarad aan caadi ahayn. Awood xardho Fiidiyowga 4K HDR. Iyo suurtagalnimada isticmaalka caanka ah Habka "gaabis gaabis ah". Maxaa diiwaan geliya fiidiyowga oo ah 960 wareeg ah halkii labaad oo leh xallinta Full HD. Baasaboor dhab ah.
Marka laga hadlayo baytariyada, Sony waxay rabtay inay siiso aaladda cusub ee loo yaqaan 'Xperia' madax-bannaanideeda. Ku saabsan Xaraashka Xperia XZ2, waxay yeelan doontaa a 2.870 Mah batari. Iyo Sony Xperia XZ2 batari leh 3.180 Mah. Waxaan aragnaa sida kororka awoodda xamuulka iyo ismaamulka aaladahaan ay sidoo kale u adeegto in lagu daro. Iyada oo ay suurtagal tahay in lacag la soo dallaco wireless-ka nooca weyn.
Si loo dhameystiro koox rajo leh, labada nooc Sony Xperia XZ2 ayaa kor u qaadi doonta kuwa awoodda badan Qualcomm Snapdragon 845. Processor awood u leh sameynta qalabkan ayaa bixiya waxqabad aad u sareeya. Taasina waxay ka dhigi doontaa isticmaalka tamarta mid aad loo xakameeyo. Sony Xperia XZ2 wuxuu ku siin doonaa dhammaantood qalabkan. Wayna samayn doonaan Android 8.0 Oreo, sidee bay noqon kartaa si kale.
Xaashida xogta ee cusub ee Sony Xperia XZ2 iyo XZ2 Compact
Faahfaahinta farsamada Sony Xperia XZ2 Compact
Tusaale XZ2 Compact XZ2
Nidaamka hawlgalka Android 8.0 Oreo Android 8.0 Oreo
Screen 5 inches 5.7 inches
Gacaliye Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 845
Kaydinta Gudaha 64 Gb oo leh taageerada MicroSD illaa 400 Gb 64 GB oo leh taageerada MicroSD ilaa 400 GB
Kaamirada hore 5 Mpx 5 Mpx
Xuduudaha kala duwan USB 3.1 Nooca C - NFC - Bluetooth USB 3.1 Nooca C - NFC - Bluetooth
Tilmaamo kale Akhriska Faraha - Dual SIM Akhriska Faraha - Dual SIM
Batariga 2.870 Mah 3.180 Mah
Cabbirada 135 x 65 x 12.1 mm 153 x 72 x 11.1 mm
Peso Gram 168 Gram 198
Qiimaha 599 euros 799 euros
Xperia XZ2 fiidiyowga laga soo qaaday MWC18
Xperia XZ2 Compact fiidiyowga laga soo qaaday MWC18
Maxaad u malaynaysaa waxa cusub ee ka socda Sony?
Sida aan aragno, Sony kamay jabin wararka. MWC-kan ayuu hilibkii oo dhan saaray dubka. Oo iyana mar kale ayay iskii isu soo fureysaa si ay ugu guuleysato suuqa sii kordhaya ee sii xumaanaya oo leh laba sharad oo halis ah si ay u hesho niche dabiiciga ah. Waxaan wajahaynaa labo terminaal oo karti leh oo awood u leh inay isku cabbiri karaan cid kasta oo la tartameysa. Sony wali boos ma ku leedahay dhamaadka-dhamaadka?
Labada qalabba waxay wadaagaan ficil ahaan dhammaan qeexitaanadooda. Kala soocista kaliya cabirka, dhumucda, batteriga iyo culeyska. Sidoo kale dabcan qiimaha. Cad u tag faahfaahinta awoodda leh ee laba cabbir oo kala duwan. Waxaa loogu talagalay kuwa aan jeclayn shaashadda sii kordheysa. XZ2 waxaad kaheli doontaa dhamaan waxyaabihii ugu dambeeyay ee Sony, iyo nooca Compact waxaad lahaan doontaa isku mid laakiin cabir yar
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Sony » La kulan Sony Xperia XZ2 cusub iyo XZ2 Compact
MediaTek P60 ayaa si rasmi ah loogu soo bandhigay MWC18